Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီARUS, Ferroviaria ရထားစနစ်များကို Fair မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုကိုယ်စားပြုထားပါတယ်
07 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
Arus Ferroviaria ရထားလမ်းစနစ်တရားမျှတမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုကိုယ်စားပြုခဲ့သည်
မီလန်တွင်ကျင်းပခဲ့သော Anatolian မီးရထားစနစ်များ Cluster (ARUS) ၏ဥရောပမီးရထားစနစ် (ERC) စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ပြည်ထောင်စု, အီတလီ Ferroviaria ရထားလမ်းစနစ်တရားမျှတမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
Anatolian မီးရထားစနစ်များ Cluster ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာ İlhami Pektas ဖန်ဆင်းတဲ့ကြေညာချက်မှာတော့; "ဟုအဆိုပါပြပွဲအတွက်မီလန်, အီတလီ, ဥရောပသမဂ္ဂ Ferroviaria ရထားလမ်းစနစ်ကရထားစနစ်ကျင်းပခဲ့သည်ဘယ် (ERC) ပထမဦးစွာကျွန်တော်တစ်ဦးဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဥရောပမီးရထားစနစ် (ERC) ၏ပြည်ထောင်စု, တူရကီ 16 14 အပါအဝင်ပါဝင်ပတ်သက်ဥရောပနိုင်ငံတွေ, ထိုရထားစနစ်များတိုင်းတစ်ယူနစ်အဖြစ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ 2020 အစည်းအဝေးတွင်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့, ထိရောက်မှု၏အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာကျင်းပ, ဒါကြောင့်အပေါ်ဖေရက်၏အနက် Cosme စီမံကိန်းဆုအခမ်းအနားနှင့်ပါလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ တူရကီကနေ ARUS အတူတကွကျနော်တို့စီမံကိန်း Cosme စတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်စပိန် railgruop နှင့်အတူအီတလီနိုင်ငံကနေ Ditecf ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ 2019 ကြှနျုပျတို့စီမံကိန်း3ဖို့ဆုပေးပြီအစည်းအဝေးပြီးနောက်ဆုအခမ်းအနားနှင့်အတူချီးမြှင့်မြင်ကြပြီ။ ငါနောက်နှစ်တူရကီမှဆုချီးမြှင့်ဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ "သူကဆိုသည်။
တူရကီ Wagon စက်ရုံ Inc က တူရကီအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအတွက်ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားပြုမှုခဲ့ (TÜVASAŞ) InnoTrans 27 / 09 / 2012 "Inno ဖြတ်ကျော် 2012 ဘာလင်" မီးရထားနည်းပညာ, အခြေခံအဆောက်အဦများ, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ခရီးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလယ်ကွင်းတီထွင်မှုများနှင့်ပြအဆုံးရမှတ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်လာမယ့်နေကြသည်ကို လုပ်. , '' ရထားလမ်း '' အကြီးဆုံးထိုဒေသတွင်တရားမျှတတဲ့ဖြစ်ခြင်း၏အရည်အသွေးကိုသမုတ်သော။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင်ဘူလ်ဂေးရီးယားနှင့်တရားမျှတမှာအီရတ်မှဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောTÜVASAŞပို့ကုန်, ဥရောပ, ရထားလမ်းဆောင်ရွက်ချက်၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အာရှနှင့်အာဖရိကပြင်းထန်သောအကျိုးစီးပွားနှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်အော်ပရေတာTÜVASAŞကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့်အတူပေါင်းစပ်၎င်း၏ရပ်တည်ချက်အပေါ်မြောက်မြားစွာပဏာမဆွေးနွေးပွဲလုပ်လေ၏။ TÜVASAŞကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့, Macedonian အဘိဓါန်ပြည်နယ်မီးရထားအီဂျစ်ပြည်နယ်မီးရထား, ဘူဂေးရီးယားပြည်နယ်မီးရထား, စလိုဗမီးရထား, ဆူဒန်မီးရထား, ပါကစ္စတန်မီးရထား ...
TÜVASAŞ '' 2012 တူရကီ၏ Inno ဖြတ်ကျော်ဘာလင်တရားမျှတသောအကောင်းဆုံးကတော့ Format ကိုအပေါ်ကိုယ်စားပြုမှုခဲ့ 28 / 09 / 2012 တူရကီ Wagon စက်ရုံ Inc က ဘာလင်, ဂျာမနီတှငျကငျြးပခဲ့ (TÜVASAŞ),, တူရကီအတွက်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနှင့်အရှိဆုံးဂုဏ်သတင်းကိုနိုင်ငံတကာရထားလမ်းပြပွဲဟာအကောင်းဆုံးလမ်းအတွက်ကိုယ်စားပြုခဲ့ပါတယ်။ "Inno ဖြတ်ကျော် 2012 ဘာလင်" မီးရထားနည်းပညာ, အခြေခံအဆောက်အဦများ, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ခရီးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလယ်ကွင်းတီထွင်မှုများနှင့်ပြအဆုံးရမှတ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်လာမယ့်နေကြသည်ကို လုပ်. , '' ရထားလမ်း '' အကြီးဆုံးထိုဒေသတွင်တရားမျှတတဲ့ဖြစ်ခြင်း၏အရည်အသွေးကိုသမုတ်သော။ ဘူလ်ဂေးရီးယားနှင့်အီရတ်TÜVASAŞဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဥရောပတရားမျှတတဲ့တင်ပို့ဖို့ဤအခြေအနေတွင်, အာရှနှင့်အာဖရိကမှရထားလမ်းဆောင်ရွက်ချက်၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားပြင်းထန်သောအကျိုးစီးပွားနှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အတူတူTÜVASAŞကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အနေဖြင့်ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်အော်ပရေတာ, သူတို့ရဲ့တဲ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်သည်နှင့်အတူ ...
Inno ဖြတ်ကျော်TÜVASAŞ 2012 အဆင်းလှသောမှာတူရကီကိုယ်စားပြု 18 / 09 / 2012 စက်တင်ဘာလ 18 21-2012 သမိုင်းအကြားကျင်းပဘာလင်, ဂျာမနီအတွက်TÜVASAŞ, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရထားလမ်းပြပွဲတက်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ "Inno ဖြတ်ကျော် 2012" မီးရထားနည်းပညာ, အခြေခံအဆောက်အဦများ, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ခရီးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလယ်ကွင်းတီထွင်မှု လုပ်. ပြအဆုံးရမှတ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်လာမယ့်နေကြတယ်, '' ရထားလမ်း '' အကြီးဆုံးထိုဒေသတွင်တရားမျှတတဲ့ဖြစ်ခြင်း၏အရည်အသွေးကိုသမုတ်သော။ ကြောင်းခြင်းမပြုမီ, နောက်ဆုံး 2010 နှင့်TÜVASAŞအတွက်သဘောပေါက်အဆိုပါလည်းမျှတ 45 အတွက်နိုင်ငံများမှသင်တန်းသားများတက်ရောက်ခဲ့သည်,2243 တထောင်ဆန်းသစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်နည်းပညာများကိုပြသခဲ့ကြသည်။ 103 စုစုပေါင်းထက် ပို. တရာနိုင်ငံများမှတထောင်ဧည့်သည်များ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူဖွဲ့စည်းအဆင်းလှသော, 2012 အတွက်ပိုပြီးဧည့်သည်များရည်ရွယ်သည်။ ပြင်းထန်သော ...
Inci Aku Frankfurt အတွက် Automechanika တရားမျှတမှာတူရကီကိုယ်စားပြု 16 / 09 / 2016 Inci Aku Frankfurt အတွက် Automechanika တရားမျှတမှာတူရကီကိုယ်စားပြု: တူရကီ Inci Aku ဘက်ထရီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တန်ဖိုးအရှိဆုံးအမှတ်တံဆိပ်, 13 - စက်တင်ဘာလရက်စွဲ Frankfurt Automechanika တရားမျှတသောမှာအရပျကို ယူ. , အကြား 17 2016 ရာအရပ်ကိုယူပါလိမ့်မယ်။ အပိုပစ္စည်း, မော်တော်ကားဆက်စပ်ပစ္စည်း, နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးနှင့် EFB စီးရီးထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်ပြသခံစား, ထိုကဲ့သို့သောမော်တော်ယာဉ်ပစ္စည်းကိရိယာများ Inci Aku အဖြစ်တရားမျှတရဲ့အများအပြားထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများမှာပြသပါလိမ့်မည်။ က Short ဘက်ထရီရိနာစွဲခြင်းနှင့်စီးကူးစမ်းသပ်ဘက်ထရီစမ်းသပ်သူတစ်ပြိုင်နက်တည်းကြောင့်ပြပွဲ၏အာရုံစိုက်ဖို့ကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဦးဆုံးဖြစ်ခြင်းနိုင်စွမ်း IS ။ ပုလဲ GS Yuasa, မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးအမျိုးအစားထဲမှာ Start ကို-Stop ဘက်ထရီနှင့်အတူကားများ, အလင်းစီးပွားဖြစ်မော်တော်ယာဉ်များနှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာ ...
ကိုယ်စားပြုဖို့ Libart Grand Design တရားမျှတသောအတွက် Kinetic ဗိသုကာပညာ 15 / 04 / 2017 Kinetic ဗိသုကာအတွက် Libart Grand Design မျှတသောကိုယ်စားပြုရန်: Libart မေလအကြားတစ်ပါတ်မှုအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပလက်ဖောင်း 29 ဧပြီလ7အပေါ်တစ်ပါတ်မှုအတွက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု-oriented ထုတ်ကုန်ကိုယ်စားပြုပါလိမ့်မယ်, အင်္ဂလန်အတွက်နောက်ဆုံး 10 နှစ်ပေါင်း၏အရေးအပါဆုံးကုန်သွယ်များထဲမှတရားမျှတပြီးပြပွဲဖြစ်ရပ်များ Grand Design Live ရေတွက် '' ဆန်းသစ်သောထုတ်ကုန် Libart စက်မှုလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တစ်ဦးအလွန်ရောင်စုံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပလက်ဖောင်း၌စည်းဝေးကြလိမ့်မည်ဟုကိုယ်စားပြုပါလိမ့်မယ်။ အဆင်းလှသောမှာအိမ်ယာ၏အသုံးပြုသူများသည်နှင့်ဝယ်ယူဆန်းသစ်တီထွင်မှု-oriented စနစ်များနှင့်ထုတ်ကုန်များအတွက်ရိုးရာရှာပုံတော်ပြပါလိမ့်မည်ထွက်ဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ အဆိုပါပြပွဲလွတ်လပ်စွာအဆောက်အဦများ, ဒေါင်လိုက်လျှောတံခါးနှင့်လျှောဖန် guillotine ရွေ့လျား Libart ခေါင်မိုးစနစ်များ, လသာပေါက်ဆောက်လုပ်ရေး, ပူဇော်ဖို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဖွင့်လှစ် ...
တူရကီ Wagon စက်ရုံ Inc က တူရကီအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအတွက်ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားပြုမှုခဲ့ (TÜVASAŞ) InnoTrans
TÜVASAŞ '' 2012 တူရကီ၏ Inno ဖြတ်ကျော်ဘာလင်တရားမျှတသောအကောင်းဆုံးကတော့ Format ကိုအပေါ်ကိုယ်စားပြုမှုခဲ့
Inno ဖြတ်ကျော်TÜVASAŞ 2012 အဆင်းလှသောမှာတူရကီကိုယ်စားပြု
Inci Aku Frankfurt အတွက် Automechanika တရားမျှတမှာတူရကီကိုယ်စားပြု
ကိုယ်စားပြုဖို့ Libart Grand Design တရားမျှတသောအတွက် Kinetic ဗိသုကာပညာ
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစက်မှုဝန်ကြီးကုန်သည်ကြီးများအသင်းအတွက် UTIKAD ပိုမိုအစွမ်းထက်ကိုယ်စားပြုရန်
ARUS နှင့် TCDD အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရထားစနစ်များအင်ဂျင်နီယာစာတမ်းဖတ်ပွဲပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
ARUS, Eurasia ရထား 2019 အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနတရားမျှတသောအသံခဲ့